सडक बिना पक्की पुल ? गाउपालिकाद्धारा सडक निर्माण शुरु « Salyan Today
सडक बिना पक्की पुल ? गाउपालिकाद्धारा सडक निर्माण शुरु
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको वडा ५ र ८ को आलिमा पर्ने जुम्ले अम्रैमा ४ वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको पक्कि पुलमा सडक बन्ने भएको छ । सडक विना ४ वर्ष अघि जुम्ले अम्रै खोलामा थियो । विना सडकमा पक्कि पुल वने पछि स्थानीय रुष्ट वनेका थिए । जग्गा विवादका कारण सडक विना पुल १ करोड वढी लागतमा वनेको थियो ।
तर सिम्ता गाउँपालिकाले तदारुकता देखाए पछि अब उक्त पुल भएर सडक वन्ने भएको छ । वडा ५ र ८ जोड्ने गरि सडक विस्तार हुने भए, पुल प्रयोगमा आउने भएको छ । आलि जुम्लेअम्रै जोड्ने सडकमा ४ वर्ष पहिले सडक बिनाको सिम्ता खोलामा बनेको पक्की पुल अब प्रयोगमा आउने छ । संघिय सरकारले सडक विना खोलामा पुल निर्माण गरेको थियो ।
अहिले पुलको दुबै पट्टी सडक बनाउने कार्य स्थानीय सरकारले शुरूवात गरेका छ । गाउपालिकाले सडक निर्माण गरेपछि पुल प्रयोगमा आउने गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसिले जानकारी दिनुभयो । हचुवाका भरमा विना सडक पुल निर्माण भए पनि यसको उचित प्रयोग गर्न गाउँपालिका तयार भएको अध्यक्ष केसिको भनाइ छ ।